Izigaba ku-iPhone yangempela
Ku-Actualidad iPhone ungathola noma yiluphi uhlobo lolwazi oluhlobene hhayi i-Apple kuphela kodwa futhi nezimbangi zayo. Ngokusebenzisa izigaba ezahlukahlukene ungathola ikhambi laleyo nkinga elethwa yi-iPhone yakho, uhlelo oludingayo ukuze uhlele izithombe zakho, ukuhlanganiswa kwemidlalo noma izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili….
Ngaphezu kwalokho, futhi ungaziswa ngazo zonke izindaba, zombili izindaba ze- amadivayisi we-apula ahlukile kanye nezinsizakalo ezibeka kithi, ngaphandle kokukhohlwa ukuqhathanisa namatheminali amele kakhulu emakethe yezingcingo ze-Android.
Yebo noma kunjalo, awukwazi ukuthola ikhambi lezinkinga zakho, ungaxhumana nokuhlukile kokuhlukile Abahleli be-iPhone News, ukuze sikusize ngokusemandleni ethu.
Isitolo sohlelo lokusebenza
I-iPhone 6 Plus
I-iPhone 6s Plus